Let's talk about IT: Linux commands (1)
Linux console ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တယ့် အခါ တစ်ချို့ command တွေက သိထားရင် command line interface မှာ အတော်အသုံးဝင်ပါတယ်။ မသိလည်းရတယ် ၊ သိရင် ပိုအဆင်ပြေတယ့် command လေးတွေပေါ့။ နည်းနည်းချင်း ခေါင်းထဲပေါ်လာသလောက် ရေးသွားပါမယ်။
Log file လိုဟာမျိုးကို ဖတ်တယ့်အခါမှာ tail command ကသုံးဝင်ပါတယ် ။ ဆိုကြပါတော့၊ httpd ရဲ့ access_log file ။ Apache process run နေပြီး user တွေက access လုပ်နေတိုင်း access_log ကရေးနေပါတယ်။ ဒီလို log မျိုးရဲ့ နောက်ဆုံး process တွေ log ကို လိုချင်ရင် အလွယ်တကူက `cat /var/log/httpd/access_log ဆိုပြီး cat ထုတ်လိုက်တာမျိုး ၊ tail -n50 /var/log/httpd/access_log ဆိုပြီး နောက်ဆုံး လိုင်း 50 ခေါ်ကြည့်တာတို့ လုပ်လိုက်တာများတယ်။ ဒါတွေက ဒီ command ကို ရိုက်လိုက်တယ့် အချိန်က log ထဲမှာရှိတာကိုပြတာပါ။ Real time တောက်လျှောက်လာရေးနေတာကို ဖတ်ချင်ရင်တော့
ဆိုပြီး tail -f ကိုသုံးပါတယ်။ ဒါဆို console ထဲမှာ log file ကပွင့်လာပြီး log မှာ တစ်လိုင်းအသစ်လာရေးတိုင်း တစ်လိုင်းတက်တက်လာတယ်။ ဒါဆို debug လုပ်ဖို့ ပို အဆင်ပြေပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ log file ( text file တစ်ခုခုပေါ့) ကို ရှင်းလိုက်ချင်တာမျိုးတွေမှာ ၊ အထဲက စာတွေ လိုက်ဖျက်ရရင်လည်း မလွယ်ဘူး။ File ကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပြီး ၊ process က log ပြန်လာရေးခိုင်းတာကလည်း ပြောရင် သိပ်မကောင်းဖူး။ File ကို ဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကိုက မကောင်းဘူး။ အထဲက content ကိုပဲ ရှင်းလိုက်ချင်ရင် ဒီလိုလေးက လွယ်တယ် ။
အရှေ့က '>' လေးက command ထဲမှာပါပါတယ်။ တစ်ကယ်က
echo "" > /path/to/log.file
ကိုလုပ်သွားတာပါ။ echo command နဲ့ output pipe '>' ကိုသိရင် ဒါကိုသိပါလိမ့်မယ်။ File ထဲက content ကို blank space တစ်ခုနဲ့ overwrite လုပ်လိုက်တာပါ။ အဲတော့ log file က empty log ဖြစ်သွားတာပေါ့။
နောက်တစ်ခုကတော့ shell arguments တွေပါ။ အသုံးဖြစ်ဆုံးကတော့ ! နဲ့ !$ ပါ ။
! က နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တယ့် argument ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ တကယ်လို့ အပေါ်မှာ file တစ်ခုကို vi သုံးပြီး edit ထားတယ်။ အခု တခြား directory ကိုရောက်နေပြီ ။ File path ကြီးကရှည်လို့ ပြန်မရိုက်ချင်ဖူးဆိုရင်
လို့ သုံးလို့ရပါတယ်။ Shell history ထဲက နောက်ဆုံး vi command ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
!$ ကတော့ last command ရဲ့ argument ကိုပဲယူတာပါ။
ls -l /bar/nyar/thar/da/kar/file
လို့ ရှာပြီး၊ နောက်တစ်လိုင်းမှာ အဲ file ကို vi မှာ edit ဖို့ဆိုရင် ပုံမှန်ဆို vi /bar/nyar/thar/da/kar/file ဆိုပြီး ရှည်ရှည်လျှားလျှားရိုက်နေရပါမယ်။ အဲတော့
လို့ရိုက်လိုက်ရင် နောက်ဆုံး command ရဲ့ argument ကိုပြန်ယူပြီး vi သွားပါလိမ့်မယ် ။
( Up arrow နဲ့ last command ကိုပြန်ခေါ်၊ Home ကိုနှိပ်ပြီး ls -l ကိုဖျက် vi လို့ရိုက် ၊ ဒါလည်းရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုမရှည်ဖူးလား။ ဒါတောင် Home တို့ End တို့ကို Shell environment ထဲမှာ set ထားမှပါ။ Unix အများစုမှာ default အားဖြင့်မပါပါဘူး။ Home နှိပ်လိုက်ရင် ^ တွေနဲ့ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ )
အခုတော့ တော်လောက်ပြီ။ အခုသုံးလိုက်မိတာလေးတွေ ပြောပြတာပါ။ နောက်ကြုံရင် ကြုံတာတွေ ရေးပါအုန်းမယ် ။ တစ်ချို့ command တွေက သူ့နောက်က option တွေအရမ်း powerful ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်။ find တို့လို command မျိုးပေါ့။ exec လို အသုံးတယ့်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ နောက်များမှ ....
Posted by Divinity at 12:46 AM
Aww, you put the title now ...
Nice post too!!
RAID is not *Backup*
Wired Equivalent Privacy ( WEP)